Xarunta Akhriska iyo qorista dadka waaweyn ee Degmada Ozaukee
Si loo bixiyo adeegyo waxbarasho oo shaqsiyadeed oo bilaash ah oo loogu talagalay bartayaasha waaweyn si kor loogu qaado xirfadaha tacliimeed iyo nolosha si ay awood ugu yeeshaan inay ku dabaqaan oo dhammaystiraan himilooyinkooda gaarka ah, xirfadeed, iyo nololeed.
In la aqoonsado inuu yahay shuraako lama huraan u ah bulshada oo bixiya adeegyo balaadhan oo ah adeegyo waxbarashadda dadka waaweyn oo si heer sare ah shaqsiyadeed loogu gogol xaarey beddelashada nolosha hal arday markiiba.
Waxaan hubineynaa in khibrada arday kasta ee ALC uu yahay mid gaar ah oo ay awoodaan inay kula baxaan xirfadaha wax qorista ee ka caawiya nolol maalmeedkooda. Waxaan ka caawinay ardayda ka badan 20 dal oo adduunka ah.
Xarunta Wax-qorista Dadka Waaweyn ee Degmadda Ozaukee waxay bixisaa umeerin hal-qof oo bilaash ah oo loogu talagalay dadka waaweyn ee raadinaya inay kor u qaadaan xirfadaha akhriska ee dhaxalka iyo inay gaaraan yoolalka shaqsiyeed.
Ma xiisaynaysaa ka-qaybgalka ALC?
Fiiri bogaggaan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah!
Noqo qof Tutor ah
Xarunta Wax-akhriska ee Dadka Waaweyn ee Gobolka Ozaukee waxay awoodaa inay ku bixiso adeegyadeeda kaliya tabaruc. Help ALC sii wadaan in ay bixiyaan adeegyo waxbarasho oo bilaash ah ardayda ay ku deeqida!
Naga fiiriya warbaahinta bulshada adoo gujinaya calaamadaha hoose